Wed, Jul 8, 2020 at 3:52pm
लिभरपुल नेपोलीसँग पनि पराजित
काठमाडौँ, १३ साउन । युरोपेली च्याम्पियन लिभरपुललाई इटालियन क्लब नेपोलीले ३–० ले हराएको छ । स्ट्राइकर लोरेन्जोले १७ औं मिनेटमा नेपोलीको खाता खोले । उनले ड्राइज मार्टिन्सको पासमा गोल गरेका थिए । २८ औं मिनेटमा इन्साइनको पासमा अर्काडिउज मिलिकले गोल गर्दै पहिलो हाफअघि नेपोलीलाई २–० को अग्रता दिलाए । ५२ औं मिनेटमा उनले गरेको प्रहार गोलकिपरले रोकेका थिए । त्यसपछिको रिबाउण्ड बललाई अमिन..
यस्तो भएमा ग्लोबल क्वालिफायरमा अझै छनोट हुन सक्छ नेपाल
काठमाडौँ, १२ साउन आईसीसी टि–ट्वाइन्टी विश्वकप क्रिकेटको एसिया क्षेत्रीय छनोटको अन्तिम खेलमा नेपाल सिंगापुरसँग पराजित भयो। नेपाल सिंगापुरसँग ८३ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित हुँदा नेट रनरेटमा कतारभन्दा पछि पर्दै तालिकाको तेश्रो स्थानमा झर्न पुगेको छ। नेपाललाई हराएको सिंगापुरले यही अक्टोबर र नोभेम्बरमा युएईमा हुने ग्लोबल छनोटमा सहभागिता जनाउने पक्का भएको छ। १४ टोलीले सहभागिता जनाउने उक्त प्रतियोगितामा शीर्ष ६ स्थान हात पार्ने..
ग्लोबल टि-२० लिग खेल्न सोमपाल र सन्दिप क्यानडा जाने, नेपाली टिम सोमबार फर्कदै
काठमाडौँ, १२ श्रावण नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम सोमबार राति १०:३० बजे मलेसियन एअरलाइन्सको बिमानबाट नेपाल अवतरण गर्दैछ। जुलाई २२ सिंगापुरमा आयोजित प्रतियोगितामा नेपालले तेश्रो स्थान हाँसिल गर्यो र युएईमा अक्टोबरमा आयोजना हुने टि-२० विश्वकप छनौटमा छनौट हुन असफल रह्यो। प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा सिंगापुरसंग ८२ रनले पराजित भयो । एउटा मात्र टिम अघिल्लो चरण छनौट हुने हुँदा अंकतालिकामा शिर्ष स्थानमा रहँदै सिंगापुर विश्वकप छनौट..
‘हामी तयार भएका रहेनछौं, छनोट नभएर राम्रै भयो’
काठमाडौँ, १२ साउन क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त हुँदा उमेश पटवालको पहिलो लक्ष्य थियो, टी-२० विश्वकप अष्ट्रेलिया । तर नेपाल ग्लोबल छनोटमा नै पुग्न सकेन । सिंगापुरमा आइतबार सम्पन्न एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा घरेलु टोलीसँग ८२ रनको लज्जास्पद हार व्यहोर्‍यो । पहिलो खेलमा कतारसँग हारेको नेपालले चार मध्ये दुई वटा मात्र खेल जिथ्यो र तेस्रो स्थामा चित्त बुझायो । समग्रमा सिंगो प्रतियोगितामा नेपालको..
काठमाडौँ, १२ साउन । सिङ्गापुरसँग पराजित भएसँगै आगामी वर्ष अष्ट्रेलियामा आयोजना हुने टी–२० विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर भएको छ । सिङ्गापुरको इन्डियन एसोसिएशन क्रिकेट मैदानमा आज भएको आइसिसी टी–२० विश्वकपकोे एशिया क्षेत्र छनोटको अन्तिम खेलमा नेपाल घरेलु टोली सिङ्गापुरसँग ८२ रनले पराजित भएपछि विश्वकप खेल्ने सपना चकनाचुर भएको हो । घरेलु टोली सिंगापुर अप्रत्यासित प्रदर्शन गर्दै टी-ट्वेन्टी विश्वकप क्रिकेटको विश्वस्तरको छनोटमा पुगेको..
निर्णायक खेलमा सिंगापुरसँग नेपाल ८२ रनले पराजित
काठमाडौँ, १२ साउन । सिंगापुरमा जारी आईसीसी टी–२० विश्वकप छनोट एसिया अन्तर्गतको निर्णायक खेलमा सिंगापुरले नेपाललाई ८२ रनले पराजित गरेको छ । १९२ रनको चुनौती लिएर ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले सुरुवाती प्रदर्शन राम्रो गरेको भएपनि कप्तान पारस खड्का र उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आउट भएपछि सम्हालिन सकेन । सिंगापुरका बलर जमेपछि नेपालले पुरै ओभर समेत खेल्न पाएन । नेपाल १५ ओभरमा सवै विकेट..
के यसपालिको टी–२० विश्वकप क्रिकेट नेपालले खेल्न पाउला ? बाटो टाढा तर जवाफ आइतबार
काठमाडौँ, ११ साउन टी–२० विश्वकपसम्म पुग्ने बाटो धेरै लामो छ। तर खेल्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ भने भोलि आइतबार पाइनेछ। आइतबार खेल्न पाउने सम्भावना कायम रहने कि अन्त्य हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ पाइनेछ। भोलि नेपालले सिंगापुर विरुद्ध एसिया क्वालिफायरको अन्तिम खेल सिंगापुरमा खेल्दैछ। यो खेल जित्यो भने नेपालको सम्भावना कायमै रहनेछ, हार्‍यो भने अन्त्य। नेपालले एसिया क्वालिफायरमा जम्मा चार वटा खेल..
कुवेत विरुद्धको जितमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने यी ४ खेलाडी
काठमाडौँ, ११ साउन सिंगापुरमा जारी आईसीसि टी–२० विश्वकप छनोट एसिया अन्तर्गतको खेलमा कुवेतमाथि नेपालले शानदार जित दर्ता गरेको छ । १४२ रनको चुनौती लिएर ब्याटिङ थालेको नेपालले कुवेतलाई सहजै हरायो । नेपालले १५ दशमलव ५ ओभरमा १४३ रन बनायो । भोलि आइतबार हुने खेलमा आयोजक सिंगापुरलाई पराजित गर्न सके नेपालले युएईमा अक्टोबरमा आयोजना हुने टि-२० विश्वकप छनौट खेल्नेछ। आक्रामक इनिंग खेल्दै अर्धशतक..
कुवेतविरुद्ध नेपालको शानदार जित, छक्कासहित चौकाको वर्षा
काठमाडौँ, ११ साउन । सिंगापुरमा जारी आईसीस टी–२० विश्वकप छनोट एसिया अन्तर्गतको खेलमा कुवेतमाथि नेपालले शानदार जित दर्ता गरेको छ । १४२ रनको चुनौती लिएर ब्याटिङ थालेको नेपालले कुवेतलाई सहजै हरायो । नेपालले १५ दशमलव ५ ओभरमा १४३ रन बनायो । ओपनर कप्तान पारस खड्काले अर्धशतक हानेका छन् । उनले ४२ बलमा ६८ रन बनाउने क्रममा एक छक्कासहित ११ चौका हाने । अर्का ओपनर..
अपडेटः कुवेतविरुद्ध नेपालको शानदार प्रदर्शन, छक्कासहित चौकाको वर्षा
काठमाडौँ, ११ साउन । सिंगापुरमा जारी आईसीस टी–२० विश्वकप छनोट एसिया अन्तर्गतको खेलमा कुवेतविरुद्ध नेपालले शानदार प्रदर्शन गरेको छ । १४२ रनको चुनौती लिएर ब्याटिङ थालेको नेपालले १० ओभरमा १ विकेट गुमाएर ९३ रन बनाएको छ । ओपनर कप्तान पारस खड्काले अर्धशतक हानेका छन् । उनले ३३ बलमा एक छक्कासहित ९ चौकाको मद्दतमा ५६ रन बनाएका छन् । अर्का ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल १३..
'गर या मर'को खेलमा नेपालले पायो १४२ रनको कुवेती चुनौती
काठमाडौँ, ११ साउन । सिंगापुरमा जारी आईसीस टी–२० विश्वकप छनोट एसिया अन्तर्गतको खेलमा कुवेतले नेपालले रनको चुनौती दिएको छ । टस हारेर ब्याटिङ गरेको कुवेतले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १४१ रन बनायो । कुवेतका लागि कप्तान मोहम्मद कासिफले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे । सम्हालिएर प्रदर्शन गरेका उनले ४९ रन बनाउने क्रममा खेलको अन्त्यतिर छक्काको वर्षा नै गरे । जसकारण कुवेतले नेपालसँगको..
अल्ट्रा धाविका मीरा राईको सम्मानमा रंगशाला
काठमाडौँ, ११ साउन । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको च्याङ्ग्रेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘मीरा राई रंगशाला’ निर्माण सुरु भएको छ। अल्ट्रा धाविका राईको सम्मानमा निर्माणाधीन रंगशालाको कामले गति लिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। राई पौवादुङ्माकै सानोदुम्माकी हुन्। नेपाललाई विश्वमाझ चिनाएकी मीरा राईको योगदानको कदर गर्दै उनको सम्मान रंगशालाको निर्माणको काम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र विभिन्न दातृ..
शनिबार नेपालले कुवेतविरुद्द खेल्दै, कस्तो छ त विपक्षी टिम ?
काठमाडौँ, १० साउन कतारसँग पहिलो खेल हारेपछि अप्रत्यासित अप्ठेराहरुको सामना गर्दै आएको नेपाली क्रिकेट टोली सिंगापुरमा सञ्चालन भइरहेको आइसीसी विश्वकप टी-२० एसिया छनोटमा अब दुई खेल जित्नै पर्ने बाध्यतामा छ। ती खेलहरु शनिवार कुवेतसँग र आइतवार अन्तिम खेल आयोजक सिंगापुरसँग छ। र, शनिवार र आइतवारको मौसम पुर्वानुमानले वर्षा हुनसक्ने सङ्केत देखाएको छ। एउटा टिम मात्रै छनौट हुने हुनाले अब नेपालले अंकतालिकामा उत्कृस्ट हुन..
विश्वकप एशिया छनोट : कुवेतको जितले नेपाललाई थप राहत
काठमाडौँ, १० साउन । आइसिसी टी–ट्वान्टी विश्वकप एशिया क्षेत्र छनोटअन्तर्गत आज भएको खेलमा कुवेतले कतारलाई १० रनले पराजित गर्दै विजयी भएको छ । सिङ्गापुरको इण्डियन एसोसिएशन क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको कुवेतले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै १९७ रनको योगफल बनायो । कुवेतका लागि अदनान आर्डिसले ५६ रनको उत्कृष्ट इनिङ खेले भने मिट भावसारले ३५ तथा उस्मान वहीदले २८..
कुवेतविरुद्ध मैदान उत्रन्छु, म फिट भइसके : कप्तान पारस
काठमाडौँ, १० साउन । आईसीसी टी–ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलका लागि नेपालले शनिबार कुवेतसँग खेल्दैछ । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्का कुवेतविरुद्धको टिममा मैदान उत्रने भएका छन् । चोटका कारण मलेसिया विरुद्धको खेल गुमाएका नेपाली खड्काले आफू पूर्ण रुपमा फिट भएकोले कुवेत विरुद्धको खेलमा मैदानमा उत्रने बताएका हुन् । कतार विरुद्धको खेलमा ब्याटिङका क्रममा पारस चोटिल भएका थिए । पिचको कन्डिसन हेरेर..
आगामी अक्टोबरमा नेपाल क्रिकेट संघको निलम्बन फुकुवा गर्दै आईसीसी
काठमाडौं, ९ साउन आगामी अक्टोबरमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निलम्बन फुकुवा हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)को हालै सम्पन्न साधारणसभाले नेपालमा भएको चुनावी प्रक्रियाको समीक्षा गरेको थियो । बैठकले नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा भए निलम्बन फुकुवा गर्न बोर्डलाई म्याण्डेट दिएको छ । यसको पुष्टि गर्दै स्वतन्त्र समितिका सदस्य रइस थापाले भने, ‘अब आईसीसीको साधारणसभा बसिरहनु पर्दैन, बोर्डले नै निलम्बन फुकुवा..
फिफा वरीयतामा नेपाल एक स्थान तल झर्‍यो, पहिलाे स्थानमा काे ?
काठमाडाैं, ९ साउन । फिफा वरीयतामा नेपाल एक स्थान तल झरेकाे छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले सार्वजनिक गरेको वरीयतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको हाे । फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे नयाँ वरीयता नेपाल १ सय ६६ औँ स्थानमा झरेको छ । यसअघि नेपाल १ सय ६५ औँ स्थानमा थियाे । वरीयताको शीर्ष स्थानमा बेल्जियम छ । कोपा अमेरिका विजेता ब्राजिल दोस्रो स्थानमा रहँदा फ्रान्स तेस्रो,..
ज्ञानेन्द्र मल्लको ब्याटबाट रन ! ‘ढिलो आयो तर कडा आयो’
काठमाडौँ, ८ साउन आइसिसी टी-२० विश्वकप एसिया छनोट प्रतियोगितामा नेपालले मलेसियामाथि ७ विकेटको जित निकाल्दा ज्ञानेन्द्र मल्लले दुई वटा ठूला कीर्तिमान बनाएका छन्। मलेसियाले दिएको ८४ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कप्तानीको भूमिकामा रहेका ज्ञानेन्द्र ओपनिङमा आएका थिए। नियमित कप्तान पारस खड्का घाइते भएको हुँदा नेपाली टिमको नेतृत्व गरेका ज्ञानेन्द्रले आक्रमक ब्याटिङ गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रले २० बलमा अर्धशतक प्रहार गर्दै पहिलो कीर्तिमान बनाए। उनी..
क्रिकेटका 'बाहुबली' श्रीलंकाका कुलसेकराले लिए सन्यास
एजेन्सी, ८ साउन । ३७ वर्षीय श्रीलंकन बलर नुवान कुलसेकराले खेलाडी जिवनबाट सन्याश लिएका छन् । कुलसेकरा पूर्व विश्व नम्बर एक एकदिवशीय बलर पनि हुन् । श्रीलंकन क्रिकेटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सर्वाधिक विकेट लिने फास्ट बलरको सूचीमा उनी चामिन्दा भास र लासिथ मालिंगापछि तेस्रो स्थानमा छन् । यसैगरी कुलसेकरा टीट्वेन्टी क्रिकेटमा श्रीलंकाका लागि दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने बलर हुन् मालिंगापछि । नयाँ बलमा राम्रोसँग स्विङ..
मुग्लिन, ८ साउन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१५ स्थित रामपुरमा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको सहयोगका लागि इच्छाकामना गाउँपालिकामा सहयोग समिति गठन गरिएको छ । मङ्गलबार गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङको संयोजकत्वमा ४६ सदस्यीय गाउँपालिकास्तरीय सर्वपक्षीय सहयोग समिति गठन गरिएको हो । समितिमा जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकारलगायत छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले समग्र जिल्लाको..
हरायो नेपालले मलेसियालाई, ज्ञानेन्द्रको अर्धशतक
काठमाडौँ, ८ साउन । कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले कीर्तिमानी पारी खेलेपछि नेपालले टि २० विश्वकप अन्तर्गतको एसिया छनौटमा मलेसियामाथि ७ विकेटको फराकिलो जित हात पारेको छ । कप्तान पारस खड्का ढाडको समस्याका कारण यो खेल खेल्न नसक्ने भएपछि ओपनिङमा ज्ञानेन्द्र मल्ललाई प्रदीपसिंह ऐरीले साथ दिएका थिए । वर्षाका कारण ९ ओभरमा छोट्याइएको खेलमा मलेसियाले दिएको ८४ रनको लक्ष्य नेपालले ६ बल बाँकी छँदा ३..
Results 1926: You are at page 17 of 65